केटा कावासाकीबाट ब्लगि E्ग ईभान्जेलिज्म | Martech Zone
सोमबार, अप्रिल 30, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
अंश: प्रसिद्ध ब्लगर, मार्केटर र उद्यम पूंजीपति केटा कावासाकी, कसरी एक महान ब्लग लेख्न को लागी सल्लाह दिनुहुन्छ र कसरी उनी ब्लगर नम्बर २ as मा क्रमबद्ध भयो कसरी छलफल टेक्नोराटी। क्यालिफोर्नियामा आफ्नो घरबाट बोल्दै, उसले मार्केटिंग भ्वाईसको जेनिफर जोन्ससँग भेट गर्दछ र नोट गर्दछ कि उसले दिनको २- hours घण्टा ब्लगि spendमा बिताउँछ। उहाँ पनि गहुँ रबर्ट स्कबल (ऊ अब टेक्नोराटीमा Scoble भन्दा माथि छ)। यद्यपि उसले वास्तवमा कुनै पनि ब्लग पढ्दैन, उहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँ आफ्नो प्रयोग गर्नुहुन्छ आरएसएस धार्मिक अद्वितीय ब्लगर चारा कब्जा गर्न फीड।
म आजको कम, कम मूल्यको लागि सबै तपाईंको हुन सक्छु ...
मई 1, 2007 मा 6: 08 PM
यो साथी सुन्न सधैं धेरै चाखलाग्दो हुन्छ। Vid को लागी धन्यवाद!
डेभिड ऐरी :: रचनात्मक डिजाइन ::
मई 3, 2007 मा 9: 01 एएम
यो पोष्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद। मलाई सुन्न रमाईलो लाग्यो।
मई 3, 2007 मा 11: 56 एएम
तपाईलाई स्वागत छ, डेभिड र हरेक दिन! मलाई गाई कावासाकी कुरा सुन्न मन पर्छ। उहाँ ऊर्जावान, हास्यपूर्ण हुनुहुन्छ र महान् चारैतिरको मान्छेजस्तो देखिन्छ। निस्सन्देह उसको सकारात्मक मनोवृत्तिले उसको उत्कृष्ट सफलतालाई निम्त्याएको छ।
मई 4, 2007 मा 9: 11 एएम
मैले पढेको छु of उसलाई डारेनको ब्लगमा, तर यो पहिलो पटक हो मैले केटालाई अनुभव गरें। म उनको पारदर्शिता र अन्तरदृष्टिबाट धेरै प्रभावित छु। मसँग खाना खानको लागि मेरो सूचीमा उसलाई राख्दै छु।
यो पोष्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद।